Huawei Y6s: Unboxing, Review, Specs ary Price - Victor Mochere
Huawei Y6s: Unboxing, Review, Specs ary ny vidiny
Fotoana famakiana: 36 mn novakiana
Huawei dia iray amin'ireo marika lehibe indrindra sy sarobidy indrindra eto an-tany, izay iray marefo sy manankarena indrindra momba an'io raharaha io, eny fa na dia eo aza ny fetra ara-barotra any Etazonia. Mbola mandeha matanjaka eo amin'ny departemantan'ny smartphone izy ity ary amin'ny maha-mpanamboatra azy tsy voavidy amin'ny teti-bolan'ny fitaovana namana
Rehefa manokatra ilay boaty ianao, dia hihaona miaraka; Huawei Y6s, charger, USB tariby, mpitari-dalana haingana, fitaovana eject, horonan-tsary miaro amin'ny bateria, sarimihetsika fiarovana TP, ary karatra fanaovana warranty. Ny iray ananako dia tsy ho an'ny fivarotana (amidy), noho izany dia miaraka amina charger, USB cable sy eject tool ihany.
Raha tsy misy tohiny intsony dia haiko ny endri-javatra fototra ary homeko mari-pahaizana Huawei Y6s.
Huawei Y6s dia manana fampisehoana tena tsara ho an'ny finday avo lenta fidirana. Tsy milaza aho hoe izy no tsara indrindra eo amin'ny tsenan'ny fidirana fa amin'ny vidiny Ksh 13,999 dia mahazo loko mazava tsara isika. Ny zoro mijery dia tsara ihany ary mamiratra tokoa raha ny marina. Ny fampisehoana dia mety ho iray amin'ireo zavatra tsara indrindra amin'ny smartphone dia ny fampisehoana azy. Ny efijery dia malalaka tsara hijerena sary, hijerena horonantsary, famakiana na filalaovana lalao. Ary tsy maintsy ampiako, manaitra ny mazava.
Mametraka kitapo 3 GB ny fitaovana ary fitadidiana anatiny 64 GB. Izany dia fenitra tsara tokoa ankehitriny amin'ny ankamaroan'ny finday avo lenta. Ary eny, tonga amin'ny fampiharana apetraka mialoha arakaraka ny 7.57 GB. Noho izany dia mbola nahazo 56.43 GB ianao ho an'ny fampiharana hafa, sary, horonan-tsary ary zavatra hafa tianao hotehirizina ao amin'ny telefaona. Ampy ho an'ny ankamaroan'ny olona ny fitahirizana fa raha tsy izany dia manana safidy karatra microSD ianao, hatramin'ny 512 GB. Ankoatr'izany, manana fampiharana Optimizer ianao, araka ny lazain'ny anarana, mba hahantohana ny telefaona.
c. Rafitra fikirakirana
Huawei Y6s dia mandeha amin'ny EMUI 9.1 fa tsy amin'ny EMUI 10 farany indrindra amin'ny android 10. Miaraka amin'ny Android 9. Miasa amiko ihany koa ilay fitaovana XNUMX. Miasa tsara amiko izy io, midika aho fa OS dia OS fotsiny. Mbola azoko atao ny misintona ny ankamaroan'ny rindranasa tsy misy olana. Misy toerana ho an'ny fanavaozana, ka tsy tokony hanahirana anao loatra izany.
Haingana ny telefaona, ary misy interface tsara. Tsara kokoa ny fandraisana andraikitra raha oharina amin'ireo telefaona ao amin'ilay vidiny mitovy. Tsy topana loatra na mihantona izany, na dia atsipy hatrany amin'ny fetra. Ho an'ny olona izay efa nampiasa telefaona mahatsiravina taloha, izany dia ankafizin'ny ankabeazany.
Ny telefaona dia misy fakantsary tokana 13MP aoriana, fakan-tsary 8MP ary UI fakan-tsary. Eny, tsy ny fakan-tsary no mampiavaka azy tsara indrindra fa hahavita ny asany tsara fotsiny. Hira sy tsy fahitana, karazana fanasana rehefa manidy antsipiriany tsara kokoa eo amin'ny sary. Toy izany koa amin'ny maody selfie, saingy ny pitsopitsony dia tena tsara kokoa noho ny nantenako ho an'ny finday avo lenta fidirana. Ny sary nalaiko tamin'ny telefaona dia navoaka etsy ambany.
Ity telefaona ity dia ho mpandahateny azo entina aminao ihany. Midika izany fa afaka mahatsapa ara-bakiteny ny firafitry ny feo ianao rehefa mihaino feo na mijery horonantsary. Izy io dia mamoaka am-pahalalana bebe kokoa ny bas sy ny treble mamiratra na dia amin'ny mozika mafy aza. Mety havela ny helony amin'ny fiheverana fa misy sub-woofer kely io. Ho an'ireo tia mozika manokana dia ity no notadiavinao. Mampanantena anao aho fa, amin'ny alàlan'ity telefaona ity, dia tsy ho diso mihitsy na dia tokana aza.
Izaho dia karazan'olona mandany tele amin'ny telefaona. Manomboka amin'ny fihainoana mozika, amin'ny streaming video amin'ny YouTube, milalao lalao, zavatra amin'ny Internet sy maro hafa. Hell, ny findaiko dia toy ny mpandray anjara amin'ny fiainako. Ho an'ny bateria 3020 mAh, ambany dia ambany amiko izany. Ny telefaona koa dia tsy miaraka amina famahanana haingana, noho izany dia mihena be. Nandritra ny fotoana nampiasana ny telefaona dia afaka milaza aho fa tsy maharatsy ny fihinanana bateria raha mbola miala amin'ireo enta-mavesatra ireo ianao, toy ny lalao sy horonan-tsary.
Miresaka momba ny fananganana kalitao sy ny famolavolana. Ny fitaovana dia miorina amin'ny plastika, ho hitan'ny endrika sy fahatsapana azy io. Fa toa tsara kokoa amiko raha oharina amin'ny hoditr'akan'ny Huawei Y6. Mizara roa ny fonosana aoriana; ny lafiny ambony dia misy fahatany mamirapiratra raha ny ampahany ambany kosa misy fahataperan'ny matte. Napetaka ao an-damosina ny scanner amin'ny fanondranana an-tànana, fanampiny avy amin'ny Huawei Y6 izay tsy nanasongadina ny scanner amin'ny rantsantanana. Hitako fa malefaka sy somary maivana ilay telefaona raha oharina amin'ireo telefaona finday mora amin'ny tsena amin'izao fotoana izao.
Ambainy: 73.5 mm
Hahavony: 156.28 mm
Halalin'ny: 8 mm
Lanja: Tombanana 150 g (anisan'izany ny bateria)
Habe: 6.09 santimetatra
Loko: loko 16.7 tapitrisa
Karazana: TFT LCD (IPS)
Fanapahan-kevitra: 1560 x 720, 283 PPI
Fakan-tsary miverina: MP 13, F / 1.8 AF, jiro LED fitaratra
Fakan-tsary eo anoloana: 8 MP, F / 2.0 FF
4 x Cortex-A53 Miorina amin'ny 2.3 GHz + 4 x Cortex-A53 Miorina 1.8 GHz
EMUI 9.1 (Miorina amin'ny Android 9)
RAM 3 GB + ROM 64 GB (JAT-LX3 / JAT-L29 / JAT-LX1)
Fanohanana fahatsiarovana ivelany: Kardin'ny micro, hatramin'ny 512 GB
Sanda mahazatra: 3020 mAh
Ny mari-pahaizana mifehy ny bateria: 2920 mAh
Ny bateria tsy azo esorina
Fidirana: 100 - 240 V, 0.2 A
4G FDD LTE: Fehin-tanana 1/3/5/7/8/20
4G TDD LTE: Fehin-kase 38/40/41 (110 MHz)
3G WCDMA: fehin-tànana 1/2/5/8
2G GSM: Fehin-tanana 2/3/5/8
WLAN: 802.11b / g / n, 2.4 GHz, manohana Wi-Fi mivantana
USB: micro micro
Earjack: kaompania 3.5 mm
Toerana: GPS / AGPS, Glonass
Mpandrindra hazavana ambient
Filaminana: scanner amin'ny fanondranana lamba
Radio FM: Eny, antena vita an-tsambo
Lahatsary: ​​3gp, mp4, webm, mkv
Huawei Y6s dia natomboka tamin'ny zoma 6 martsa 2020. Aorian'izay dia azo vidiana amin'ny tele ny mpivarotra manerana ny firenena.
Huawei Y6s dia miantsena amin'ny Ksh 12,699. Vidiny mora vidy raha ampitahaina amin'ireo smartphone hafa ambaratonga fidirana mitovy amin'izany eo amin'ny tsena.
Maninona no manan-danja tokoa ny mpanolotsaina mpivady ao anaty fifandraisana iray
Fitaovana manampy hanamora ny fiainana ao an-dakozia